Manala kentrona eo amin’ny tenda sy ny maso
Tsy manao « maquillage » nefa manja be…ny tsiambaratelo
Maro ny vehivavy te hitazona mandrakariva ny hatsaran’endrika, ary tsy te hiankin-doha amin’ny karazana haingon-tava, mba hanehoana ny hatsarana.
Karazana vahaolana ho an’ny hoho simba…
Manaratsy endrika ny tanana ny hoho rehefa tsy voakarakara. Betsaka ireo karazana fahasimbana mety hahazo ny hoho. Fa misy koa ireo vahaolana mety ho an’ny olana tsirairay…
Maquillage natoraly, manatanoraendrika…
Amin’izaovaninandroiainantsikaizao dia efamanananykarazanyny « maquillage » Na tsy dia hamonjyfotoanalehibeazaizany dia azoataofoananymanao « maquillage » kelymbahamelombelonanytarehy.
Ny « fond de teint » tena mety amin’ny tarehinao…
Anio dia ny fomba fisafidianana ny karazana « fond de teint » tena mety aminao no atoronay eto amin’ny Jejoo.
Hoditra malandina, mazava, tsy misy kianina … ahoana no atao ?
Isan’ny vehivavy malaza ho tsara hoditra eran-tany ry zareo japoney. Amin’ny ankapobeny dia malandina ny hoditr’izy ireo,
Rahoviana no tokony hampiasa « crème de nuit »?
Tsy mahazatra ny vehivavy malagasy loatra ny mampiasa akora mikolo hodi-tava fanosotra amin’ny alina.
Zavoka :Manadionytarehy be mony
Fotoam-pahavokaran’nyzavokaizao.Araraotynyvokatsoaentin’ityvoankazoityamin’nysokajin-koditra be menaka, mbahahafahanymanadio, mitsabotsikelikely,
Manaratsy endrika sady maha antitra ny tarehy ireo kentrona manodidina ny maso.
Tsy voatery ho noho ny fandrosoan’ny taona ihany no mahatonga azy ireny fa mety ho avy amin’ny fahamainan’ny hodi-tava ihany koa. Azo karakaraina ao an-trano sy atao matetika ity fangaro ity, hisorohana sy hanesorana ireo kentrona madinika manodidina ny maso.
Vahona sy amande douce
Marefo ny hoditra manodidina ny maso, ka mila karakaraina tsara mba tsy hisehoan’ny fahavoazana toy ny kentrona sy ny mangana (cerne). Ny vahona dia afaka manala tsara ireo kentrona manodidina ny maso, satria sady manamandina ny hoditra izy io no mampitsotra ireo hoditra manodidina ny fihirifana. Dintim-bahona sy menaka “amande douce” iray sotro fihinanana avy no ilaina amin’izany. Afangaro tsara ireo akora ireo dia kapohina mba hitambatra, dia iny no ampiasaina.
Mety amin’ny tenda koa
Diovina dia hamainina tsara ny tarehy. Ahosotra amin’izay ilay fangaro ka ireo kentrokentrona manodidina ny maso sy ny fihirifana no hosorana azy. Tandremo tsara anefa ny maso mba tsy ho voa. Azo asiana ity fangaro ity koa ny hoditry ny tenda, raha manomboka mikentrona, na miroradroraka. Avelao hilona eo mandritra ny 30 minitra vao kobanina amin’ny rano mangatsiaka. Averina isa-kariva izy ity, dia vetivety dia ho hita ny vokany.